Muuqaal: Faarax Macalin oo Weerar ku Qaaday Shirka Ururka ONLF kula Jiro Itoobiya ee ka socda Nairobi (Daawo) | Kalshaale
Muuqaal: Faarax Macalin oo Weerar ku Qaaday Shirka Ururka ONLF kula Jiro Itoobiya ee ka socda Nairobi (Daawo)
Feb 13, 2018 - 15 Aragtiyood
Nairobi (Kalshaale) Magaalada Nairobi ee Xarunta dalka Kenya waxaa ka furmay Shir u dhexeeya Dawladda Itoobiya iyo Ururka ONLF waxaana la filayaa in marka uu soo dhamaado ay kasoo baxaan go’aano ku saabsan waxyaabaha la isla meel-dhigay.
Hadaba waxaa arintaasi si adag ugahadlay Siyaasiga Faarax Macalin oo Horey xil uga soo Qabtay dalka Kenya, Wuxuuna sheegay inuu ka dhigan yahay “Boqol maalmood anigoo sooman ayaan Bakhti ku Afuray” Wuxuuna itoobiya ku eedeeyay in damac wayn uga jiro dhulka Soomaali galbeed, balse dadka aanu waxba ka gelin.
Asc ninkan farax aniga maqaan lkn waa nin dhiig leh oo nool somalinimada ku dheertahay Allah ku x afido waa Halyey somalida ukacay
Faarax macalin wuxuu xur ka yahy qalbiga iyo maskaxda
In ONLF Hoos fadhiisato Lugaha Axmaaro waxaa sababey markii Sargaal Soomaaliyeed laga dhoofiyey Xamar to Jeelka Xaniiyo Siibka Addiss Ababa.
Sidaan horeyba u sheegnay Axmaaradu waxey danta ugu weyn ka laheyd iney signal Digniin ah u dirto Halgamayaasha “” Xataa Xamar kuma bad baadeysaan/ kuma dhuumankartaan ee inta goori goortahey oo – iley Luf Luf Axmaaro meydkiina lugta madaxa ka saarin soo fadhiista lugaheyga”.
Farax Dawaara waa nin leh aragti toosan laakiin degaankiisa Lagdheera dayacay.
Wararka iga soo gaadhahaya Nairobi waxay tibaaxayaan inay ONLF dooratay lets live under Amhara constitution, halgankiina loo beddelo mid siyaasadeed oo Addis dastuurkeeda la aamino ama lagu shaqeeyo.
Ayaan darro ka wayn ma jirto in maanta la aqablo dastuurka Itoobiya.
ONLF iyo Itixaadka iwm waxay xaynaab aminyeed u ahaayeen Soomaali oo dhan
Maanta derbigaasi waa la jabiyay weliba loo jabsaday si dulliniimo ku jito.
Halganku weligiisa malaha waannu daalnay.
ONLF haddii ay daaleen waxay ahayd inay xubnahooda ku yidhaahdaan waar kala yaaca intaad is dhiibi lahaydeen laakiin rag u arkay maraq muufo la marsan karo oo ONLF ka mid ah ayaa u qayilayay qadiyaddii oo dhan.
Waana hadalkii Heelaale ee ahaa garab adhi dal siistaa mar arag goortan ka horowe..
Waa in la helaa ONLF cusub, Itixaad cusub iyo jabahado kale oo u midoba xoreynta dalkaa Somaaliyeed ee gumaysiga ku jiro.
Waxaa dagaalkii Ogaadeeniya ku dhintay 2 xag aabbo ka wada dhalannay, adeerkay iyo 3 wiil oo uu dhalay, 1 kale oo adeerkayga dhalay iyo tira kale oo reer keenna hoose ah. Soomaali badanna way la mid ama ka daran
Dhiiggooda ma dastuurka Itoobiyaa?
No way. Halganku waa inuu socdaa oo Somalida dhabta ah taageertaa.
Xabashidu maantu leexada ayaa sidata si kasta oo reer galbeedku u waylaalinayaan.
Jihaad dhab ah waa in la helaa.
Garqaad, Mr Bahal, Axmad Soomaali
Fadlan aynu saxno ereyga Dalmida
Macnhu waa sax laakiin qoritaankiisu waa
Down to intruders & the snitches!!
ASC DANTU CEEBA MA LEH DADKUNBAA
IS KU NACAAYA
MEEQA SANO AYAY DAGALAMAYEEN ONLF
HADANA WAXBA GACANTA UGUMAJIRAAN
ADEER MEESHA WAXBA KUMA HAYSAANR ORDOO AXMAARKA LA CUNA CANJEERO WADANIDAA
MIYAAD ARAGTEEN DAGAAL AAN FAA IDO LAHAYN OO SOMALI GASHO KAN ONLF MOYAANE
onlf 50 sanay dagalamaysaye yaaku qasbay inay is dhiibto oo dagaal la galay so somali iyo dawladedi oos wata ma aha. aad ban usoo dhawaynayaa inan itobiya iyo somali oon kala haynay 50 sano isku fasaxno bal waxay kala helaan.
Jaalle waad ka dhacsan tahay
Adeer halgan ma yaqaan taariikh badh jaban iyo waan daalnay.
Macaan jecesha ayaa garab adhi siisata qaddiyaha shucuubta Islaamka
Midda aan la qarinkarin waa in ay madaxqabiileedka Soomaaliyeed ku raaligeliyeen ABASIINIYA soo qaqabashada xubnaha ONLF. Waxayba ugu darneyd markii Xamar laga dhoofiyey BAAKAD WEYN = QALBIDHAGAX. Sorry erayga aan isticmaalay.
Sidaasoo ay tahay ma fiicno in loo HOYDO = La isu dhiibo TIGREDA. Lkn meel aan la fileynin ayaa Alle swt ka keenikaraa NASRIGA & GUUSHA.
Uomo prapone e Dio disponere . Qofku wuu qorsheystaa, ALLAA’SE iska leh akhbalaadda. Fiilooyinkan ay isku xirxirayaan gaalada iyo dabaqoodhigooda, u badi iney IYAGA la rogmato.
Somaligu hala dagaalamo wuu yaqaan lkn waxa uu udagaalamayo micnaheeda rasmiga mayaqaan
Deegaankaaga ku ekow, maxaa kaa galay Somalia galbeed. Ka hadal NFD xayawaanyahow.